ဒီနေ့ ပျော်သည်……. – ရှအေလငျး
မိမိဆိုင်ရှေ့မှာချိတ်ထားတဲ့အရုပ်လေးတွေကိုရပ်ကြည့်နေတဲ့ကိုရင်လေးကို … ကိုရင်လေးဘုရားဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းပြည့်စုံပါလားဘုရား လို့ မေးလိုက်တော့ ပြည့်စုံပါတယ် ဒကာမကြီး။ ကိုရင်လေးစာဝါလိုက်နေပါလားဘုရားဆိုတော့၁ တန်းပါ တဲ့ . ကိုရင်ဘုရားအရုပ်လိုချင်လို့လားဘုရားလို့မေးလိုက်တော့ မိမိကို ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းလေးငြိမ့်ပြတယ်။
ကိုရင်လေးလိုချင်တဲ့ကားအရုပ်လေးတွေကိုလှူပေးခဲ့တယ်။မိမိလှူပေးတာတွေ့တော့ ဘေးကလူတစ်ချို့က … ကိုရင်ဆိုတာစာသင်ရမှာလေကစားရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ . အလွန်ဆုံးရှိ၆ – ၇ နှစ် အရွယ်မိဘ နဲ့ ဝေးပြီးခုလို အလွန်အေးတဲ့ဆောင်းနံနက်ခင်း ၆ – ၇ နာရီမိမိတို့ အများစုကုတင်ပေါ် စောင်ခြုံလို့ကွေးကောင်းတုန်း အချိန် … အနွေးထည် ဦးထုပ်မပါခြေဗလာ နှင့်ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ဘုရားသားတော်ကိုရင်လေးနေရာဝင်ကြည့်ပေါ့
ကလေးဘဝအရွယ်မှာသူလည်းအဖေ့အိမ်မှာ ပျော်ချင်မှာပဲအမေ့ရင်ခွင်မှာ နွေးထွေးမှုတွေလိုချင်မိမှာပဲလေ … သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားချင်မိမှာပဲလေ … ကိုရင်လေးကိုအရုပ်ပေးလှူခဲ့တာအပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့လား? သူတို့လေးတွေစာဝါလိုက်ချိန်လိုက်ကစားချိန်လည်း ကစားနားချိန်နားပြီးသာသနာတော်မှာပျော်မှမြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှာမဟုတ်လား?
ကိုရင်လေးတွေဆိုတာအနာဂါတ်ရဲ့စာချဆရာတော်လောင်းတရားဟောဆရာတော်လောင်းအရိယာလောင်း တွေလို့ပဲ မြင်မိပါတယ် သူတို့လေးတွေသာသနာတော်မှာပျော်ကြပါစေ သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ ကိုရင်လေးကိုနောက်နောင်ဆွမ်းဟင်းမပြည့်စုံရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ဆိုင်ကို ကြွခဲ့ပါဘုရား ဆိုတော့ကိုရင်လေး ပြုံးပြခဲ့တဲ့ အပြုံးကမိမိတစ်ရက်လုံးအတွက် အားဖြစ်စေပါတယ်
မိမိဆိုငျရှမှေ့ာခြိတျထားတဲ့အရုပျလေးတှကေိုရပျကွညျ့နတေဲ့ကိုရငျလေးကို … ကိုရငျလေးဘုရားဆှမျး၊ ဆှမျးဟငျးပွညျ့စုံပါလားဘုရား လို့ မေးလိုကျတော့ ပွညျ့စုံပါတယျ ဒကာမကွီး။ ကိုရငျလေးစာဝါလိုကျနပေါလားဘုရားဆိုတော့၁ တနျးပါ တဲ့ . ကိုရငျဘုရားအရုပျလိုခငျြလို့လားဘုရားလို့မေးလိုကျတော့ မိမိကို ပွုံးစိစိနဲ့ကွညျ့ပွီးခေါငျးလေးငွိမျ့ပွတယျ။
ကိုရငျလေးလိုခငျြတဲ့ကားအရုပျလေးတှကေိုလှူပေးခဲ့တယျ။မိမိလှူပေးတာတှတေ့ော့ ဘေးကလူတဈခြို့က … ကိုရငျဆိုတာစာသငျရမှာလကေစားရမှာ မဟုတျဘူးတဲ့ . အလှနျဆုံးရှိ၆ – ၇ နှဈ အရှယျမိဘ နဲ့ ဝေးပွီးခုလို အလှနျအေးတဲ့ဆောငျးနံနကျခငျး ၆ – ၇ နာရီမိမိတို့ အမြားစုကုတငျပျေါ စောငျခွုံလို့ကှေးကောငျးတုနျး အခြိနျ … အနှေးထညျ ဦးထုပျမပါခွဗေလာ နှငျ့ဆှမျးခံကွှနတေဲ့ဘုရားသားတျောကိုရငျလေးနရောဝငျကွညျ့ပေါ့
ကလေးဘဝအရှယျမှာသူလညျးအဖအေိ့မျမှာ ပြျောခငျြမှာပဲအမရေ့ငျခှငျမှာ နှေးထှေးမှုတှလေိုခငျြမိမှာပဲလေ … သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဆော့ကစားခငျြမိမှာပဲလေ … ကိုရငျလေးကိုအရုပျပေးလှူခဲ့တာအပွဈဖွဈတယျတဲ့လား? သူတို့လေးတှစောဝါလိုကျခြိနျလိုကျကစားခြိနျလညျး ကစားနားခြိနျနားပွီးသာသနာတျောမှာပြျောမှမွတျစှာဘုရား သာသနာတျောကွီး ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲမှာမဟုတျလား?
ကိုရငျလေးတှဆေိုတာအနာဂါတျရဲ့စာခဆြရာတျောလောငျးတရားဟောဆရာတျောလောငျးအရိယာလောငျး တှလေို့ပဲ မွငျမိပါတယျ သူတို့လေးတှသောသနာတျောမှာပြျောကွပါစေ သာသနာတျောကွီးကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျကွပါစေ ကိုရငျလေးကိုနောကျနောငျဆှမျးဟငျးမပွညျ့စုံရငျပဲဖွဈဖွဈလိုအပျတာရှိရငျပဲဖွဈဖွဈတပညျ့တျောဆိုငျကို ကွှခဲ့ပါဘုရား ဆိုတော့ကိုရငျလေး ပွုံးပွခဲ့တဲ့ အပွုံးကမိမိတဈရကျလုံးအတှကျ အားဖွဈစပေါတယျ
ယနေ့ ည ၉နာရီ ၁ မိနစ်မှာ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူ …ဗီဒီယိုဖိုင်
“အနာဟောင်း အနာဆွေး ဝိဇ္ဇာပေးတဲ့ ဆေး”
ဖတ်ပြီးရင် ဆို့နင့်သွားစေမယ့် အဆိုတော် စိုင်းဆိုင်မောဝ် ဇနီး ရဲ့ နောက်ဆုံး...
ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင်း… ခါးရိုးကျိုးသွားခဲ့တဲ့ …လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်...
ရှေ့ခြေထောက်၂ ချောင်းမပါပဲ မွေးလာရလို့ နောက်ခြေထောက် ၂ ချောင်းနဲ့သာ...